यी क’स्ति नि’र्द’यी आमा ज’स्ले गरिन आ’फ्नै ३ स’न्तानको नि’र्म,म ह,त्या” – Life Nepali
काठमाडौँ – अष्ट्रियामा एक नेपाली महिलाले आफ्नै तीन स न्तानको ह,त्या गरे पछि विदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय स्तव्ध छ। अष्ट्रियाबाट प्रकाशन हुने क्रोने अनलाइनले ३१ वर्षिया एक नेपाली महिलाले आफ्नै अपा र्टमेन्टमा तीन ब च्चाहरुको ह,त्या गरेको समाचार सार्वजनिक गरे पछि विश्वभर सनसनि फैलिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रियाको उच्चस्रोतका अनुसार ह,त्याको अभियोग लागेकी बुटवल घर भएकी ३१ वर्षिया चन्द्रा भट्टराई अर्याल हुन्। ****लाइफ नेपाली ***थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, ****
स्रोतका अनुसार अर्याल दम्पतीमा लामो समयदेखि पारिवारीक स,मस्या थियो। उनीहरुको परिवार गुल्मीबाट वुटवल सरेको थियो। उनीहरुको बीचको झग,डाको बारेमा स्थानीय प्रहरी समेत जानकार थियो। प्रहरीले उनका श्रीमान अर्याललाई १५ किलोमिटरको दुरी भन्दा नजिक आउन नपाउने गरि प्रतिवन्ध लगाएको थियो। उनकी छोरीहरु गैरआवासीय नेपाली संघ लगायतका सामाजिक संघसँस्थाहरुको सांस्कृतिक कार्यक्रममा समेत सकृय सहभागी हुँदै आएका थिए।नागरिकन्युजबाट
स्रोतका अनुसार केही समय अघिमात्र उनले आफ्नो परिवारभित्र समस्या रहेको भन्दै केही सामाजिक संघसँस्थाका अगुवाहरुसँग सहयोगको लागि याचना गरेकी थिइन्। शनिबार विहान भएको घट,नाबारे प्रहरीलाई सम्पर्क गर्दा ति महिला नेपाली भएको बताएको अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत प्रकाश कुमार सुवेदीले पुष्टि गरेका छन्। दूतावासका अनुसार प्र,हरी निरन्तर दूतावासको सम्पर्कमा रहेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
ति महिलाले दुई छोरी र एक छोराको ह,त्या च,क्कु प्र,हार गरेर ह,त्या गरे पछि आ,त्मह,त्याको प्रयास गरेकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार मृतक मध्य ८ महिनाको छोरा र नौं र तीन वर्षिया छोरीहरु रहेको बताएको छ। प्रह,रीले अर्याललाई अनुस,न्धानको लागि हिरासतमा लिएको छ। उनीको शनिवार साँझ मेन्टलहेल्थ लगायतको स्वास्थ्य प,रीक्षण गरिएको बुझिएको छ। **
*****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,*****
Previous दशैको लागी ठुलो बोका नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? यति सस्तोमा किन्न इच्छुकले सिधै फोन गर्नुहोस् !
Next दशैंको दिनमा पर्यो यस्तो ब’ज्रपात, छोरी भन्छिन् ‘बुवालाई बचाउन म आफुलाई बे’च्न पनि तयार छु’